Rohingya Students Forum: မြန်မာ မူစလင် ဘင်္ဂါလီ မဟုတ်ပါ [အပိုင်း-၁]
မြန်မာ မူစလင် ဘင်္ဂါလီ မဟုတ်ပါ [အပိုင်း-၁]
ရေးသားတင်ပြသူ ❇ မောင်ဝတ်လုံ (မြောင်းမြသား) |
သြဂုတ်လ ၂၉ရက်နေ့ ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဌမနေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇) မှ ဦးဇာယာဒ် ရော်မ (ခ) ဦးဌေးဝင်း ၏မေးခွန်းကို
“မြန်မာ မွတ်စလင် ဟု သုံးနှုံးသွား သူများသည် ရခိုင်ပြည်နယ် ၊မောင်းတော ဒေသအတွင်းမှာ နေထိုင်ကြသည့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများကို ရည်ညွန်းပြော ဆိုခြင်းဟု ယူဆ ပါကြောင်း..”
ဟု ဖြေကြားချက်ကို ကြားမိ၍ မြန်မာမွတ်စလင် ဟူသည် မည်သူများနည်းဟု ဆိုသည်ကို သမိုင်း အထောက် အထားများရှာဖွေ ၍ ပြည်သူထဲမှ ပြည်သူတစ်ဦးက ပြည်သူ့အသံဖြင့် တင်ပြလိုပါသည်။
အစ္စလာမ်၊ မွတ်ဆလင်မ်၊ မဟာမေဒင်
“ အစ္စလာမ်”ဟုသည် အရဘီစကား ဖြစ်ပါသည်။ “ငြိမ်းချမ်းစေခြင်း၊ အမိန့်နာခံခြင်း”ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ (အလ်-ဖရာအိဒ် အရဗီ-အင်္ဂလိပ် အဘီဓါန် ၊ဘေရွက်မြို့ထုတ်)
“မွတ်ဆလင်မ် ”ဟူသည်အရဘီသာသာစကားဖြစ်သည်။ “ငြိမ်းချမ်းစေသူ၊ အမိန့်နာခံသူ ” ဟု အဓိပ္ပါယ် ရပါသည် ။ (အထက်ပါ အဘိဓါန်)
လက်တွေ့အသုံးချတွင် အစ္စလာမ် ဟူသည် ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်၍ ယင်းဘာသာတရားကို သက်ဝင် ယုံကြည်သူ မည်သူကိုမဆို မွတ်ဆလင်မ် ဟု ခေါ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် “မွတ်ဆလင်မ် ” ဟူသည်မှာ “အစ္စလာမ်” ဘာသတရားကိုကိုးကွယ် သူမည်သည့်လူမျိုးမဆိုခေါ်ပြီးလူမျိုးတစ်မျိုး ၏ အမည်မဟုတ်ပါ။
“မဟာမေဒင်” ဟူသည် ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့ က ခရစ်တော် ၏သာသနာ “ခရစ်ယာန်” ဟုခေါ်သကဲ့သို့ အစ္စလာမ် ဘာသာ၏ ခေါင်းဆောင်ကြီး “တမန်တော် မုဟမ္မဒ်” ကိုအစွဲပြု၍ “မဟာမေဒင်” ဘာသာတရား ဟု မှားယွင်းစွာ အမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ (ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာ ကိုဘားမား ၊ ရန်ကုန်ကို ရဲန်ဂူးန် ဟု မှားယွင်းစွာ အမည်ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ ) (စာရေးသူ၏ ဥပဒေဘွဲ့စာတမ်း)
မြန်မာနိုင်ငံ သို့ အစ္စလာမ်ရောက်ရှိလာပုံ
(၁) ခရစ်သက္ကရာဇ် (၇၀၀-မှ ၁၅၀၀) အတွင်းအင်္ဂလန် နိုင်ငံတွင် နှင်းဆီစစ်ပွဲ (War of Rose ) စစ်ပွဲကြီးများ ဖြစ်ပွားနေဆဲ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရမ်းဗြဲကျွန်းအနီး အာရဘ် သဘောင်္တစ်စီး ပျက်ခဲ့ပြီး ၊ သဘောင်္ပေါ်ပါ အာရဘ် များသည် ရမ်းဗြဲ ကျွန်းတွင် အခြေစိုက် နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ (British Burma Gazatte , 1897)
အေဒီ (၆၅၂-၆၆၀) ပုဂံ၊ ပိတ်သုံမင်း ခေတ်တွင် အာရဗ်ကုန်သည် သဘောင်္များ သထုံ မုတ္တမ ဆိပ်ကမ်း မျာသို့ မကြာခဏ ၀င်ရောက်ကြကြောင်း ၊ အေဒီ (၈၀၀) ကျော်တွင်ရေးသား ခဲ့သော အာရဗ် မှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရပါသည်။
(ဦးကြည် (ဘီအေ) ရာဇ၀င်ဂုဏ်ထူး၊ မြန်မာ့ရာဇ၀င်မှ သိမှတ်ဘွယ်ရာအဖြာဖြာ -စာ ၁၅၆၊၁၅၇)
ထိုအာရဗ် များမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်ဆလင်မ် များဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ (ရခိုင်ဒေသ၊ မွန်ဒေသ)အတွင်းဦးစွာရောက်ရှိလာသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှာ ဘင်္ဂါလီများ မဟုတ်ပဲ အာရဗ် မွတ်ဆလင်မ်များ သာဖြစ်ပါသည်။
(၂) ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအခြေချနေထိုင်ကြသော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များမှာ (အီရန် )ပါရှား နိုင်ငံသားများဖြစ်သော ဖာရစီ လူမျိုးနွယ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဖာရစီမှ ပါရသီ၊ ပါရသီ မှ ပါသီ၊ ပါသီမှ ပသီ ဟု မြန်မာ အသံဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ အထောက်အထားများမှာ ……..
ကောဇာသက္ကရာဇ် (၅၈၃) ခုနှစ်မှစ၍ ကုလား-ပသီ မင်း (၃)ဆက် ပုသိမ်မြို့ကို ၁၂နှစ်တိုင် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြ၍ ပုသိမ်မြို့မှာ “ ပသီ”မြို့ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
(မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း ၊ အတွဲ ( ၆) စာ -၃၅၀ ) (၁၉၅၅ -၅၆ ခုနှစ်ထုတ် ပုသိမ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ မဂ္ဂဇင်း ၊ စာ-၅) (ဦးမာဃ ၊ပုသိမ် ရာဇ၀င် ၊စာ- ၁၃၇)
ထိုဖာရစီ -ပသီများမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အီရန်အနွယ် ၀င်များဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ဦးစွာ အခြေချ နေထိုင်သူများမှာ ဘင်္ဂါလီများမဟုတ်ပဲ အီရာန် နွယ်ဖွား ပသီ မွတ်ဆလင်မ်များသာ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသို့လည်း အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ၀င်ရောက်နေ၍ အခြေချနေထိုင်သည်များရှိပါသည်။
(၃) အေဒီ (၁၂၅၅-၁၂၈၅) ပုဂံမင်းဆက် ၊ နရပတေ့မင်း လက်ထက်တွင် တရုတ်တို့နှင့် စစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ တရုတ်စစ်တပ် (တာတာ စစ်တပ်) ၏ အကြီးအမှူးမှာ ဗိုလ်မှူးနဇရွတ်ဒင်း (အစ္စလာမ်အာရဗ်အမည်) ဖြစ်ပါသည်။ (၁၃၇၃-၇၄ ခုနှစ်တွင် စိုက်ထူခဲ့သော ရတနာစေတီ ကျောက်စာ)
ရတနာစေတီကျောက်စာ တွင် “မြင်းစိုင်းရောက် ခန်းတရက် မင်းကြီး ”ဟု ရေးထားပါသည်။ “ခန်း” ဟူသည် (တရုတ် ဧကရာဇ်) “ ကုဗလိုင်ခန်း” ကို ဆိုလိုဟန်တူပါသည် ။“တရက်”ဟူသည် “တူရကီ” ဟူသောစကားမှာ ပျက်လာဟန်တူသည်။ “တရက်”လူမျိုး တို့ကို မောင်ဂို (မောင်းဂွတ်) မန်ချူးရီးယန်းလူမျိုး၊ မဟာမက်ဘာသာဝင်များ၊ တရုတ်ပန်းသေးများ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါသည်။
(ဦးဘသန်း ၊ ကျောင်းသုံးမြန်မာရာဇ၀င် ၊ စာ- ၈၇-၉၆ )
ထိုတရုတ် / မောင်ဂို/ မောင်းဂွတ် / မန်ချူးရီးယား (ယခုအခေါ်)ပန်းသေး များမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တရုတ်လူမျိုးများ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြောက်ပိုင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များမှာ ဘင်္ဂလီများမဟုတ်ကြပဲ တရုတ်မွတ်စလင် များသာဖြစ်ပါသည်။
(၄) (၁၄) ရာစုနှစ်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမြိတ်မြို့သို့ အာရဘ်ကုန်သည် များရောက်ရှိရုံသာမက ၊မြိတ်မြို့နောက်လယ်ရပ်တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
(မောရစ်ကောလစ် Into Hidden Burma ) (ဦးခင်မောင်ကြီး ၊ဗြိတိသျှ သံဖနောင့်အောက်မှ မြန်မာပြည် ၊ဒုတိယတွဲ -စာ ၂၀၇)
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ဘက် မြိတ်ဒေသသို့ ၀င်ရောက်အခြေစိုက်နေထိုင်ကြသော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များမှာ ဘင်္ဂလီများမဟုတ်ကြပဲ အာရဗ် မွတ်ဆလင်များသာဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက်ရခိုင်ဘုရင်များနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဆက်စပ်ပုံကိုတင်ပြပါမယ်။
(၅) အေဒီ ( ၁၄၀၄ မှ ၁၆၀၂) အထိ ရခိုင်ဘုရင်များသည် မွတ်ဆလင်မ်ဘွဲ့ အမည်များတပ်ခဲ့ပါသည်။
(မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ထုတ် ၊ အခြေပြ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး သမိုင်း၊ ပ-တွဲ။ စာမျက်နှာ -၃၈၇ )
(၁၄၅၉ -၈၂) တွင်မင်းဖြစ်ခဲ့သူ ဘစောဖြူလက်ထက်တွင်ရခိုင်ပြည်သုံး ကျပ်ဒင်္ဂါများတွင် အစ္စလာမ် ယုံကြည်ချက် အာရဗီစာသားများ ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ဘုရင် အတော်များများ ၏ အင်အားမှာ မသေးသောကြောင့် ဘင်္ဂလား ၁၂မြို့မှ ရခိုင် ဘုရင်များကို လက်ဆောင်ပဏ္ဍာ များဆက်သခဲ့ကြကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထား များတွေ့ရပါသည်။
(၁၆၆၀) ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ဘုရင်ဖြစ်လာသော စန္ဒဓမ္မမင်းလက်ထက်တွင် အိန္ဒိယ ပြည်မဂို ဘုရင် သြရန် ဂဇစ် နှင့် ညီတော် ရှာရှုဂျာ မင်းသားတို့ နန်းလုခဲ့ကြရာမှ ရှာရှုဂျာ မင်းသား အရေးနိမ့်ပြီ ချွေယံသင်းပင်းများနှင့် ရခိုင် ဘုရင်ထံ ခိုလှုံခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသူများ ၏ အဆက်အနွယ်များမှာ “ကမန်” တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်လာပါ သည်။ (ပသီ ဦးကိုလေး၊ မြန်မာပြည်နှင့် အစ္စလာမ်သာသနာ)
ထိုကမန်တို့မှာလည်း ဘင်္ဂါလီများမဟုတ်ပဲ မဂိုအနွယ် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ သာဖြစ်ပါသည်။
(၆) အေဒီ (၁၅၃၀-၁၅၅၀) တွင်တောင်ငူ ဘု၇င်တပင်ရွှေထီးလက်ထက်တွင် ၄င်း၏ တပ်များက မွန်တို့ဌာနေ ဟံသာဝတီ ကို ချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ မွန်တို့ဘက်မှ ပသီပန်းသေးများ က မြို့ထိပ်မှ စိန်ပြောင်း မြတပူ တို့ဖြင့် ပစ်လွတ်နေ၍ အရှအနာများပြီးရှေ့မတိုးနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
(မှန်နန်းရာဇ၀င် တော်ကြီး၊ ဒုတိယတွဲ ၊စာ-၁၈၆ )တောင်ငူရာဇ၀င် စာ-၂၉၆)
ထို ပသီပန်းသေးတို့မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တရုတ်အနွယ်မွန်နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြပါသည်။ ၄င်းတို့ ဘင်္ဂါလီများ မဟုတ်ကြပဲ မွန် မွတ်ဆလင်မ်များ ဖြစ်ပါသည်။
(၇) အေဒီ ( ၁၆၀၅-၁၆၈၂)အတွင်း တောင်ငူဘုရင် အနောက်ဘက်လွန်မင်း ခေတ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခေတ်တွင် သန်လျင်မြို့မှ ပေါ်တူကီလူမျိုး ငဇင်ကာ ပုန်ကန်ခြားနားလာသဖြင့် အနောက်ဘက် လွန်မင်းတပ်များ သန်လျင်ကို ချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ငဇင်ကာ က အိန္ဒိယ မှ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် စစ်သားများ ပါဝင်သော စစ်သင်္ဘော ၅စင်း ကို ငှားရမ်းခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ ဘုရင့်စစ်သည် များအောင်နိုင်၍ ငဇင်ကာ အသတ်ခံရပါသည်။ စစ်သင်္ဘော ၅စင်းအနက် ၄စင်းကို စစ်သားများဖမ်းမိခဲ့သည်။ လှေတပ်ဝန်မင်း ရဲကျော်ထင် ၏လျှောက်ထားခဲ့ရာ မင်းကြီး က ပသီ တို့ကို မသတ်မညှစ်ရ ဟု အမိန့်ထုတ်ပြီး ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်လာစေခဲ့ပြီး ယင်းသုံ့ပန်းများ ကို ရွှေဘို မြို့မြောက်ဘက်ရပ်နှင့် အင်းဝ မြောက်ဘက်တို့တွင် အစုခွဲ ပြီးနေရာချထားပေးခဲ့ပါသည်။
(မှန်နန်း ရာဇ၀င်၊ တတိယတွဲ၊စာ ၁၇၂ )
အနောက်ဘက်လွန်မင်း လွန်ပြီးနောက် (၁၆၂၉-၁၆၄၈) တွင်နန်းတက်သော သာလွန်မင်း လက်ထက်တွင် ဘုရင့် အမိန့်တော်နှင့် ဖမ်းဆီးရမိလာသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တို့ကို ရွှေဘိုနယ်၊ စစ်ကိုင်းနယ်၊ ကျောက်ဆည်နယ်၊ တို့တွင် လုပ်မြေ၊နေမြေ များပေး၍ အတည်တကျနေရာချထားပေး၏ ။ ဘုရင့် ကိုယ်ရံတော်တပ်တွင် လည်းသေနက်ကိုင် စစ်မှုထမ်းများ အနေဖြင့် ခန့်ထားခဲ့၏။
(ဦးဘသန်း၊ ကျောင်းသုံးမြန်မာ ရာဇ၀င်) စာ-၂၇၀)
ယင်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းတွင် အခြေတကျ နေထိုင်ခွင့်ရသူများမှာ ဘင်္ဂါလီများ မဟုတ်ပဲ မြန်မာ ဘုရင့် သစ္စာခံ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များဖြစ်ပါသည်။
(၈) အေဒီ (၁၆၉၈-၁၇၁၄) အတွင်း စနေမင်းထံသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား (၃၀၀) ကျော်သည် ရခိုင်ဒေသမှ တဆင့် ၀င်ရောက်ခိုလှုံလာကြသည်။ ၄င်းတို့အထဲတွင်စစ်ရေးကျွမ်းကျင် သူ ဗိုလ်မှူး စစ်မှူးများပါလာကြသည် ။ ထို့ကြောင့် ၄င်းတို့ကို တစ်စုတစ်ဝေး ထဲမထားသင့် ဟု မှူးမတ်များက ဘုရင့်ကိုလျှောက်တင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၇၀၉ ခုနှစ်တွင် ၄င်းတို့ကို ဘုရင့်အမိန့်တော်နှင့် လူစုခွဲပြီးနေရာ ချထားပေးခဲ့ပါသည်။ ချထားသော နေရာများမှာ တောင်ငူ၊ရမည်းသင်း ၊ ညောင်ရမ်း၊ ယင်းတော်၊ မိတ္ထီလာ ပင်းတလဲ ၊ ဗောဓိ ၊ စည်သာ၊ စည်ပုတ္တရာ ၊မြေတူး၊ ဒီပဲယင်း စသော ၁၂မြို့မှာ ပသီ ၁၂ အုပ်စု နေရာခွဲချထားပေးပါသည်။
(ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးဘရှင် ၊ Come of Islam of Burma ) (ဆရာ ဦးဘိုးချယ် ဗမာမွတ်စလင်တို့ ၏ ရှေးဟောင်းအထုပ္ပတ္တိ)
ယနေ့ ရွှေဘို မြောက်လက်မှာ ရှိကြသော (၃၇၀၀) အနွယ်များမှာ ဤအနွယ်များဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့သည် ဘင်္ဂလီ များ မဟုတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံ သားခံယူလာကြသူ အိန္ဒိယ အနွယ် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ သာဖြစ်ပါ သည်။
သီပေါမင်းလက်ထက် အမြောက်တပ်မှူး ဦးဘိုးကာ ၏ ဓါတ်ပုံကို www.mmsy.org မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။
Posted by Rohang king at 10:51 AM
Labels: ရိုသမိုင်း, History, သုတ
❀ အကဲခတ်မိသည့် Xenophoic ရောဂါသည်များ "ပတ်လည်ဝိုင...
မြန်မာ့ ပညာရေး အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားရခြင်း အကြောင...
ဇုလ်ဟိဂ်ျဂျဟ်လ ပထမဆယ်ရက်၏ ထူးမြတ်မှုနှင့် ကျင့်စဉ် ...
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးနွယ်စု| တိုင်းရင်းသား နှင့် မြန်မ...
AZOLA CÁAZADA [Ekkán Ofúna Kissá]
“Inauthentic description of the term Rohingya by s...
Fair Play in Burma
Rangoon University Rohingya Students Association a...
MEÉRBÁN HONNÚA? [Who is the Best Benefactor? ]
ကမ္ဘာကျော်မယ့် ရှစ်လေးလုံးက ဖြစ်ရပ်မှန်
ရိုဟင်ဂျာ ပထမဦးဆုံး သတင်းစာဆရာ ဆရာဦးဖော်ယာစ် အဟ်မဒ...
Fifty Haddis In Rohingya Zuban by Qari Kefayot Ull...
Social Media ၌ ပညာပေးတိုက်တွန်းမှုများဖြင့် ထင်ရှား...
1990 Multi-Party Democracy General Elections And T...
ရိုဟင်ဂျာ ရိုးရာ ဓာံင်ကားလား (ကျည်းသားရိုက် ကစားနည...
Learn Malay through Rohingya: Part-3